Botulism (ဘော်ကျူလစ်ဆင်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Botulism (ဘော်ကျူလစ်ဆင်)
Botulism (ဘော်ကျူလစ်ဆင်) ကဘာလဲ။
ဘော်ကျူလစ်ဆင်ဆိုတာ Clostridium botulinum ရဲ့ အဆိပ်ကြောင့် ဖြစ်သော အခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းအကောင်က A ကနေ G အထိ အဆိပ်အမျိုးအစား၇ခုထုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း A,B,E နဲ့ F ကသာ လူတွေကို ဒုက္ခပေးတာပါ။
အစာအဆိပ်သင့်ခြင်း၊ အနာမှအဆိပ်သင့်ခြင်းနဲ့ ကလေးငယ်များတွင် ဘော်ကျူလိုင်အဆိပ်သင့်ခြင်းဆိုပြီး ဘော်ကျူလစ်ဆင်ပုံစံ ၃မျိုးရှိပါတယ်။
Botulism (ဘော်ကျူလစ်ဆင်) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘော်ကျူလစ်ဆင်ဟာ လူတစ်ယောက်မှ တစ်ယောက်သို့ မကူးစက်နိုင်ပါဘူး။ အန္တရယ်ရှိအချက်များကို ရှောင်ကျဉ်ခြင်းဖြင့် ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို လျော့ချနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သိရှိလိုသည်များအတွက် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
Botulism (ဘော်ကျူလစ်ဆင်) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ဘော်ကျူလိုင်အဆိပ်သင့် အစာတွေစားသောက်ပြီး ၁၂နာရီကနေ ၃၆နာရီအတွင်းမှာ လက္ခဏာပြပါလိမ့်မယ်။ ၅ရာခိုင်နှုန်းကနေ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်က သေစေနိုင်တဲ့အဆင့်ထိရှိပါတယ်။ ကနဦးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘော်ကျူလစ်ဆင်လက္ခဏာတွေရှိနေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်ဖြင့် ချက်ချင်းပြသပေးပါ။ အချိန်မှီမကုသဘူးဆိုရင် လက်၊ခြေထောက်နဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးအကြောတွေ သေသွားနိုင်ပြီး အသက်ရှုကြွက်သားတွေအကြောသေတဲ့အထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အသက်ရှုစက်တောင် အသုံးပြုရနိုင်လောက်ပါတယ်။
Botulism (ဘော်ကျူလစ်ဆင်) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဘော်ကျူလိုင်အဆိပ်သင့်နေတဲ့ အစားအစာတွေကို စားလိုက်မယ်ဆိုရင် ဘော်ကျူလစ်ဆင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ အစားအစာတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် မထိန်းသိမ်းတာပါ။
ဒါ့အပြင် သတိမထားမိလိုက်တဲ့အနာတွေကနေ ဘက်တီးရီးယားဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက် ဘက်တီးရီးယား ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလားပြီး အဆိပ်တွေထုတ်ပါတော့တယ်။ မူးယစ်ဆေးသုံးတဲ့လူတွေမှာ အဖြစ်အများဆုံးပါ။
ကလေးတွေအပြင်မှာ ဆော့ကစားရင်းနဲ့ မြေကြီးထဲက စပိုးတွေဝင်ရောက်ပြီးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ယင်းစပိုးတွေက အူတွေထဲမှာ ကြီးထွားလာပြီး အဆိပ်တွေ ထုတ်ပါတယ်။
ဘာတွေက ဘော်ကျူလစ်ဆင် ဖြစ်နိုင်ခြေကို မြင့်မားစေတာလဲ။
အောက်ပါတို့က ဘော်ကျူလစ်ဆင်ဖြစ်နိုင်ခြေကို မြင့်မားစေပါတယ်။
Botulism (ဘော်ကျူလစ်ဆင်) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဘော်ကျူလိုင်အဆိပ်မိခြင်းက အခြားအဆိပ်မိခြင်းများနဲ့ လက္ခဏာတွေဆင်တူတာကြောင့် ခွဲခြားဖို့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ သုံးသပ်မှုမလုပ်ခင်မှာ ဓါတ်ခွဲခန်း၌ သီးသန့်စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု အနည်းငယ်ပြုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ အဖြေရဖို့ ၄ရက်လောက် ကြာပါတယ်။
Botulism (ဘော်ကျူလစ်ဆင်) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဘော်ကျူလဆင်ကုသနည်းမျိုးစုံရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဆရာဝန်က ရောဂါလက္ခဏာတွေကို စစ်ဆေးပြီး အကြောသေခြင်းကို နှောင့်နှေးစေဖို့နဲ့ အခြေအနေပိုမဆိုးလာအောင်ထိန်းထားဖို့ ဖြေဆေးပေးထားပါလိမ့်မယ်။
ဘော်ကျူလစ်ဆင်ကို ရင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ လူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းဆေးနည်းတွေကဘာလဲ။
အောက်ပါလူနေမှုဘဝပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်တွင်းဆေးနည်းတွေက ဘော်ကျူလဆင်ကို ရင်ဆိုင်နေစေဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
အများစုကတော့ စည်သွတ်အစားအစာများ အထူးသဖြင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစားအစာ ပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့မှာ ဂရုပြုဖို့လိုပါတယ်။
အဆိပ်အတောက်တွေဟာ အပူအချိန်အမြင့်မှာ ပျက်စီးသွားနိုင်တာကြောင့် ဆယ်မိနစ်ခန့် ပြုတ်ပေးပါ။
ကလေးတွေကို ပျားရည်တိုက်မယ်ဆိုရင် သတိထားပေးပါ။ ကလေးတွေမှာဖြစ်တဲ့ အခြေအနေတော်တော်များများက ရောဂါပိုးကူးစပ်ခံထားရတဲ့ ပျားရည်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အနာကိုသန့်သန့်ရှင်းရှင်းနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် ဂရုစိုက်ပေးပါ။ အနာကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ဘော်ကျူလစ်ဆင်အန္တရယ်လျော့ချဖို့ စွဲလမ်းစေတဲ့ ဆေးများ အသုံးမပြုပါနှင့်။
မေးစရာတွေ ရှိနေမယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းလမ်းတွေကို ပိုမိုနားလည်သိရှိစေနိုင်ရန်အတွက် ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
Ferri, Fred. Ferris Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier, 2012. Print edition. Page 223
ကိုယ့်ကလေးမှာ ဒီလက္ခဏာတွေတွေ့ရင် မပေါ့ဆနဲ့နော်